Ireo lokon’akanjo tokony hampiarahina
Mitsabo fanaviana na « aphtes » amin’ny vahona
Fanaovana azy : 1. Ataovy anaty rano 1 vera ny didin’ilay vahona. 2. Rehefa vita izay dia hotsakotsano amin’iny ny ati-vava.
Tongotr’omby amin’ny legioma by Tahiry
Akora ilaina : Tongotr’omby 1 kg Sakaizam-patsany 1/4 kg Haricots verts 1 fehezana karaoty 3 Voatavo didiny 3 Ovy 3 Tongolo 1 Selery lehibe tahony 1 Sakamalaho Dipoavatra voaniny. Poarao tahony 2 Tongolo maitso sy kotomila Sira
Zavatra ilaina : · Rano · Vovoka kanelina
Main’ny masoandro, mampiasa yaourt
Zavatra ilaina: · Yaourt natiora 1
Saosety atao gratin by Nirina
Akora ilaina · Saosety 250g (2 antonontonony) · Patsa be voavaofy 500g · Tongolo 1 · Tongolo gasy 1 · Fraomazy voakiky 2 sf · Ronono 125 ml · Persily voatetika madinika · Lafarina 1 sf · Menaka · Sira sy dipoavatra
Fikafika iray hialana amin’ny fahamasahan’ny ovy be loatra
Zavatra ilaina : · Karibonetra 1 sotro kely
Mamerina ny hatsaran-tarehy amin’ny sakafo
zavatra ilaina; · pamplemousse tapany · karaoty 2 · menaka oliva 1 sotro fihinanana · zava-maitso izay tiana
ü Ny fotsy sy ny « beige » : Mora hampivadiana ireo loko roa ireo. Ny tena tsara dia manao lobaka na akanjo ambony fotsy ary asiana palitao miloko “beige” eo amboniny.
ü Ny “jeans” sy ny akanjo mitsipitsika : Tena lamaody amin’izao fotoana izao ny fampiarahana ireo. Vao mainka mampivoaka ny paozy aza raha pataloha “jeans” somary “délavé” no hanaovana ary ampiana haingo miloko mena kely ny paozy.
ü Mampivady ny akanjo fotsy : Loko roa ihany dia ampy hampivoaka ny paozy. Tena mihaja sy mateza jerena ny akanjo ambony fotsy ary ampiana palitao fotsy amboniny.
ü Volom-batolalaka sy “jeans délavés” : Mivaoka tsara ny akanjo bà miloko volom-batolalaka somary mazava, hampiarahina amin’ny “jeans délavés”, izany hoe : miloko mazava ihany koa. Pôketra sy kiraro miloko mazava no hampiarahana aminy.
Ahoana ny fomba hisafidianana solomaso?
ü Ny tokony atao voalohany indrindra dia misafidy solomaso mifanaraka amin’ny paozin’ny tarehy. Raha manana tarehy somary manifinify dia ireo solomaso somary kelikely no mety. Natao ho an’ireo somary boribory endrika kosa ireo solomaso lehibe.
ü Ny tena tsara dia atao miloko matroka ny solomaso, indrindra raha manana hoditra miloko matroka. Tsy dia misongadina loatra mantsy izy amin’izay fotoa izay no sady manaja no tsy mora mankaleo.
ü Natao ho an’ireo mpanara-damaody sy somary sahisahy ny solomaso somary mivelatra. Raha te ho tsotsotra kokoa dia ireny “montures” manify ireny no tena mety.
ü Mampahazo aina kokoa ny solomaso vita amin’ny plastika. Somary misongadina anefa izany. Tsotsotra sy mihaja kosa ny “monture” vita amin’ny vy.